धनगढी, २ साउन । सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिका–३ शहीद गेटमा शक्तिशाली बम विष्फोट हुँदा ५ जना घाइते भएका छन् । विहिवार साँझ धनगढीको निलम होटल अगाडि विस्फोट भएको प्रदेश नम्बर सातका प्रहरी प्रमुख डीआईजी तारणी लम्सालले बताएका छन् । तर के वस्तु विस्फोट गराइएको हो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । प्रहरीलाई सिलिण्डर विष्फोटको सूचना आएको थियो । तर, शक्तिशाली बम वस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुस...
बुटवल । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गमा राखेका बुद्ध मूर्तिहरू तोडफोड भएको छ । अज्ञात समुहले बुद्धका मुर्ति तोडफोड गरेको हो । रुपन्देहीको सिक्सलेन सडकको शंकरनगर चोकदेखि नयामिलसम्म रहेका ५ वटा बुद्धमूर्ति तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ । शान्तिका प्रतिक बुद्धको मुर्ति कसले र किन तोडफोड गर्यो भन्ने खुलेको छैन । तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरका बासुदेव घिमिरेले मुर्ति तोडफोड ...
काठमाडौं । लामो समय पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका डा सिके राउतको जिवनमा आधारीत चलचित्र बन्ने भएको छ । उनी केही समय अघि मात्र पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनले स्वतन्त्र मधेश अभियनमा लामो समय खर्चेका थिए । माँ राधिका इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा ‘डा सिके राउत’ नामको फिल्म बन्ने भएको हो । दुई दर्जन बढी भोजपुरी फिल्मको क्याप्टेनसिप सम्हालिसकेका सन्तोष शाहको निर्देशनमा चलच...
भारतीय बजारमा पछिल्लो समय नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक हुने क्रम तिब्र रहेको छ । आकर्षक डिजाइन र शक्तिशाली मोटरसाइकल सार्वजनिक गर्न उत्पादकहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यस्तैमा अबको केही समयमा सार्वजनिक हुने बजाज, केटीएम र टीभीएसका मोटरसाइकल बारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ । बजाज पल्सर २५० : बजाज अटोले पल्सर २५० अर्को महिना सार्वजनिक गर्ने भएको छ । केटीएम डुक २५० को इन्जिनमा नयाँ पल्सर २५० आउने ...
नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ मनकामनास्थित घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर घाइते भएकी महिलालाई उपचारको लागी अस्पताल लैजादै । वर्षायाममा ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा यातायात सेवा सञ्चालन नहुदाँ बिरामी तथा दुर्घटनाको घाइतेलाई स्टेचरमा बोकेर अस्पताल पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । तस्वीर ः रामहरि न्यौपाने बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकाको रु. १० लाखको आर्थिक सहयोग र बढिगाड महिला तथा बालबालिका शसक्तिकरण...
सरकारी कर्मचारीमा आफूलाई शासक र जनतालाई शासित भन्ने अवधारणाले जरो गाडेको परिदृश्यमा नयाँपुस्ता केही प्रशासक अपवाद भएर उभिएका छन् ।कर्णालीको विकट मानिने जुम्लामा ४० औं सीडीओ भएर पुगेकी दुर्गा बञ्जाडेले सेवाग्राहीलाई सत्कारपूर्वक आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर चियापान मात्र हैन, उनीहरुसंग दुखसुखका कुरा गरेर मन जित्ने अभ्यास थालेकी छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा यी तस्वीर पोष्ट गरेकी हुन् । यसअघि उनी ...
काठमाडौंमा तीन दिन देखि परेको अविरल वर्षाका कारण जनजिवन प्रभावित भएको छ । अविरल वर्षाले विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला चढेको गाडी टेकुको बागमती सडक कोरिडोरमा फसेको छ। शुक्रवार उनी सो सडकखण्डमा थिए । अविरल वर्षासँगै टेकु पुलमूनि संकलन भएको पानीमा उनको गाडी फसेको हो । गाडीमा कोइराला आफै सवार थिए । त्रिपुरेश्वरतर्फबाट पार्टी केन्द्रीय का...
लगातारको वर्षाको असर, सिंहदरवारको पर्खाल भत्कियो, रुख ढल्दा महानगरीय प्रहरी प्रभागमा क्षति
काठमाडौं, २७ असार । लगातारको वर्षाले काठमाडौं स्थित सिंहदरवारको पर्खाल समेत भत्केको छ । तीनदिन देखि परेको लगातारको वर्षाले कमजोर बनाएको सिंहदरबारको अनामनगर तर्फको पर्खाल ढलेको हो । पर्खाल ढल्दा एक जना घाइते समेत भएका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ । पर्खाल भत्किएपछि अनामनगर क्षेत्र तर्फको सडक एकतर्फि सञ्चालन भएको प्रहरीले जनाएको छ । भत्किएको पर...
निरन्तर वर्षाका कारण बरुवा नदीको बहाव बढ्दै जाँदा उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–११ स्थित शिवालयटोल तथा साकेलाटोल क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बरुवा नदीको बाँध भत्कन थालेपछि गाईघाट बजार जोखिममा पर्न थालेको छ । तीन दिनदेखि आएको निरन्तर वर्षाका कारण बरुवा नदीको बहाव बढ्दै गएपछि पुराना बाँधको ढुङ्गा खोलिन थालेको र बाँध भत्कन थालेपछि शिवालयटोल, साकेलाटोल र गाईघाट बजार क्षेत्र नै जोखिममा पर्न थालेको सा...
प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महीनासम्म गरिने विशेष पूजा शुरु गरिँदैछ । एक महीनाअघि जेष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ । सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ । आजदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ । आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीसम्म चार महीन...
पश्चिम क्षेत्रमा सर्यो बाढी, बर्दियामा दुई जना बेपत्ता
नयाँ ‘अफेयर’मा आँचल, सार्वजनिक गरिन अफ्नो प्रेमी ..!
तीज आउनु महीना दिन अगाडिदेखिनै तामझामका साथ मौलिकता बिर्सिदै तिज मनाउन थालेपछि, विकृति रोक्न प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र